HGH tsy mahazo lanja any Thailandy | Ampiasao ny hormona ho an'ny olombelona mba tsy ho matavy
HGH tsy mitongilana ao Thailandy | Ampiasao ny hormonina hitomboan'ny olombelona ho fatin'ny tavy ao Bangkok
Hormonal growth (somatotropin, HGH) Ny ankamaroan'ny olona Thailand dia mifandray amin'ny dingan'ny fanatanjahatena fanorenana. Ny fomba itondrana azy - HGH dia misy fiantraikany mahery vaika, mamporisika ny fitomboan'ny hozatra, manamafy ny hery fiarovan'ny hery fiarovana ary miteraka ny fiantraikan'ny fanarenana tanteraka. Noho ireo fahafaha-manatsara ny fahafahana manatsara ny vatana dia matetika no tsy mahita izany, fa zava-poana - ny hormone mitombo mba handorana lanja fanampiny.
Ho fanohanana, afaka mandefa ny fianarana ny Oniversite Bangkok amin'ny 1998 ianao, izay nahazoan'ny olon-dehibe 24 isan'andro ny dosie 2 mg - 5 mg HGH nandritra ny enim-bolana. Nandritra io vanim-potoana io dia tsy nihena ny lanjan'ny vatany, fa niova be ny fifandraisan'ny tebiteby sy ny taolam-paty. Tamin'ny ankapobeny, ny mpandray anjara tsirairay dia nahazo ny muscle 5.5 ary ny ankamaroany dia very 5.7 kg matavy. Ary ny tsiranoka lehibe indrindra dia voamarika ao amin'ny kibony. Tsy mahagaga raha ny zava-mahadomelina dia ny Genotropin, jintropin ary ansomone sy ny hormone hafa mifototra amin'ny fitsaboana ho an'ny atleta maro izay mikasa ny hampihena ny isan-jato amin'ny fatin'ny vatana.
Ahoana no mahatonga ny hormonina mitombo ho an'ny fahazaran-doza?
Ny ampahany goavana amin'ny toetra mahatsiravina amin'ny HGH dia mifandray amin'ny vokatr'izany eo amin'ny metabolism. Ny metabolism, Fantatra tsara fa saika ny sela rehetra ao amin'ny vatan'olombelona no ampiasaina amin'ny asidra fetsy na glucose. Ary raha ny habetsan'ny glucose ao amin'ny ra dia fehezin'ny hormone anabolic Insuline, ny habetsahan'ireo asidra fetsy ao amin'ny hormone mitombo. Ny tanjona tianao hahavitana ny fihenan-tsakafo sy ny fihenan'ny tavy, dia ny manery ireo sela mba hihinana matavy kokoa noho ny glucose. Tsy valiny ny insuline - mitazona ny glucose eo amin'ny sehatra mahazatra ary mitahiry izany amin'ny làlana. Na ahoana na ahoana, dia mahatonga ny sela hihinana io glucose io, fa tsy matavy, ary mampitombo ny fiorenan'ny asidra ao amin'ny atiny.
Nefa ny HGH dia karazana mpanohitra ny insuline, miezaka ny mampihena ny fampiasana glucose sela ary manery azy hihinana karazam-bozaka. Mba hanaovana izany, dia miondrika ao anaty fonosin'ny sela matavy izy ary manjary toy ny fitaterana fitaterana izay mitondra azy ireo avy amin'ny asidra matavy, mitondra azy ireo ho ra ary manome azy oksizenina. Amin'ny teny hafa dia mitodika ny lipolysis, izany hoe fampihenana ny isan'ny sela matavy. Ary ny tena zava-dehibe, tsy misy ny sela matromata HGH tsy hamoy ny ao anatiny ary tsy horavana. Fa raha mila asidra matavy kokoa ny sela ao amin'ny vatana, ary mitombo ny fihenan'ny sela matroka noho ny fihomboan'ny hormone, ary hitombo ny fihenan-tsakafo amin'ny tahiry, izay mitarika ho amin'ny fahaverezan'ny lanja. Raha tena te-hamintina ianao dia manomboka mihinana ny tavy ihany ny vatana. Ary noho izany, voalohany indrindra, mila mila hormona mitombo ianao.
Ny tohin'ny hormone mitombo amin'ny fahaverezan'ny volabe any Bangkok
Misy karazana hormone fitomboana maromaro. Ny tsirairay amin'izy ireo dia mikendry ireo tanjona samihafa ary tsara indrindra izany alohan'ny hampidirana ny iray amin'izy ireo hijery dokotera any Thailand. Na, farafaharatsiny, mba hahazoana antoka fa tsy lany ny lanjany dia tsy misy olana amin'ny hormones ho an'ny hormone sy ny hormones momba ny firaisana ara-nofo, raha tsy izany dia tsy hita ny vokatry ny HGH.
Ny fomba mahazatra ny HGH noho ny fahaverezan'ny fahavoazana sy ny fanalefahana ny hozatra dia manomboka amin'ny injections ao amin'ny 2 an'ny singa iray isan'andro. Raha toa ka tsy mampiseho ny fiantraikany izy ireo (ambany), ny herinandro faharoa dia azonao ampitomboina ny doka mankany amin'ny singa 5, saingy tsy misy fisiana lava be ao amin'ny vatana goavana amin'ny hormone mitombo dia mitarika ho amin'ny zava-misy fa ny pancreas amin'ny Ny fanandramana handanjana ny totalim-bola rehetra dia ny tsy fahampian'ny insuline.
Fanamarihana: Indraindray dia nanolo-tena hanampy ny pancreas amin'ny alalan'ny fanaovana tsindrona insuline fanampiny. Saingy zava-dehibe ho an'ny tetika hampiasana hormone mitombo amin'ny dose avo, mihoatra ny 5 units isan'andro.
Mba hampidirana hormonina mitombo rehefa ao anaty vatana dia mamorona ny fepetra tsara indrindra, izany hoe amin'ny siramamy mivoaka. Fotoana alohan'ny sakafo (fotoana mahafinaritra amin'ny vavony foana amin'ny maraina) ary mandritra na aorian'ny fampiharana goavana, rehefa reraky ny fikarakarana ara-batana ny siramamy. Fanoloran-kevitra fanoloran-kevitra kely, na dia misy fanehoan-kevitra tsara momba ny fampidirana ny HGH intramuscularly. Matetika mametraka ao amin'ny vavony, izay manampy amin'ny tebiteby hiredareda ao amin'io faritra io.
Ny totalin'ny HGH dia tsy tokony mihoatra ny 6 volana. Mandritra io fotoana io, araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana, ny fahaverezan'ny lanjany dia very 2 pounds mofomamy ary mahazo 2 pounds ny hozatra isam-bolana, tsy misy sakafo sy fampiharana. Saingy ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fampiharana ny hetsika rehetra natao hanesorana ny lanjany mihoatra ny lanjany dia hihatsara. Noho izany, ny valim-panafody ankapobeny momba ny hormonina mitombo dia tena mahatalanjona noho ireo mpahay siansa.
Amin'ny vanim-potoana hanatsarana ny vokatry ny HGH dia mila miditra ao amin'ny fitondrana ara-panatanjahan-tena, indrindra amin'ny fahefan'ny 2-3 in-droa isan-kerinandro. Ny fampiofanana matanjaka isan-taona dia mila manaloka aerobika. Mba hanampiana ny hormone mitombo dia manova ny vatana ho lasa metabolisma marefo, afaka miditra anaty diabeta mangatsiaka ianao. Amin'ny ankapobeny, na dia misy ny soso-kevitra hifikirana amin'ny sakafo ara-kalôria mahazatra (izany hoe mihinana sy mandany ny habetsaky ny kaloria), na ny fepetra famokarana herinaratra miaraka amin'ny kalôria fanampiny aza dia mety hitondra ny voka-dratsin'ny fatiny.
Ao anatin'ny fandaharam-potoana ho an'ny fahabangan-tena tsara indrindra dia soso-kevitra ny hisotroana sy fahavoazana hafa - ny hormone mitombo dia tsy mifanohitra amin'ny iray amin'izy ireo. Indrindra indrindra ny hormones ho an'ny tiorka, ohatra ny thyroxine (100-150 μg isan'andro) na ny triiodothyronine (25 μg isan'andro). Tsy ny fatin'izy ireo ihany no mitondra azy, fa ny vokatra tsara eo amin'ny tiroida kely ihany koa. Ary eo amin'ny hormone mitombo dia mila azy io - HGH dia manakana ny asany ary mety hitarika amin'ny fitomboany aza, hany ka hormonina ny hormonina mandritra ny vanim-potoana io dia hanampy amin'ny fampihenana ny fisehoan-javatra mety hitranga.
Ny ECA sy clenbuterol ara-pahasalamana eo amin'ny hormone mitombo ihany koa dia mampitombo ny voka-dratsiny mampitony, na dia mampitombo ny mety ho vokany eo amin'ny vatana aza.
Ny vokatry ny HGH
Raha ny marina, ny HGH dia voajanahary amin'ny vatan'olombelona. Ohatra, amin'ny vanim-potoana, ny habetsaky ny "volony" amin'ny olona dia mihena, mba hahatonga ny famerenana indray ny fahazoana HGH avy any ivelany hahitana trangan-javatra tsy mampidi-doza, indrindra raha tsy manelingelina tsy miankina amin'ny hormonina ao amin'ny vatana. Ity no vokatry ny HGH. Matetika izy io dia ampitahaina amin'ny steroïde (mitovy ny vokatr'izany, ary mampiasa ireo vondrona mitovy aminy ihany), saingy tsy misy fiantraikany amin'ny famokarana hormones momba ny firaisana ara-nofo izany, ary noho ny hetsi-panoherana hafa dia misy fiantraikany ratsy. Tsy voatery hormonal ny fitsaboana amin'ny alina ihany koa ny hormone, dia milaza koa ny momba ny fiarovana azy.
Ao Thailand dia misy anganongano ny fampiasana hormone mitombo amin'ny fitomboan'ny lanjan'ny aretina, miteraka ny fihenan'ny sofina, ny orona, ny takolaka, ny lela, ny tonon-taolana, ny taolana (miaraka amin'ny fipoahana mahatsiravina eo amin'ny toeran'ny tendrony), ny fo Sy ny taova hafa (ao amin'ny ohatra nomena ny "bodibondohazo bevohoka") dia atleta matihanina izay efa mihalehibe ary efa manangom-bovoka ankehitriny. Izany rehetra izany dia mety hitranga marina tokoa, fa raha tsy manararaotra ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny dosie misongadina be loatra. Ny fampiasana iombonana HGH amin'ny fatiantoka toy ny tsy mitombina.
Ny valiny mahazatra indrindra amin'ny HGH - syndrome karazam-pandrefesana, izay miharihary amin'ny hakelin'ny tongotra. Saingy mifamatotra amin'ny fihenan'ny nerveuses ao amin'ny faritry ny hozatra dia mitombo ny hozatra, noho izany dia ny taham-pahabangan'ny lanjan'ny aretina dia kely kokoa noho ny aretina.
Ny fiantraikany ratsy eo amin'ny pancreas sy ny vavonin'ny tiroida, araka ny voalaza etsy ambony. Prescription - hôpônina insuline sy hôpitaly. Taorian'ny fialana amin'ny fatran'ny hormone, dia sitrana ny vatana.
Ny tsindry hafahafa dia ny fitomboan'ny tsindry, izay afaka misoroka na mampihena ny dosin'ny HGH, na ny fanafody mampihena ny tsindry.
Aiza no hividianana hormonina mitombo ao Thailand?
Ny hormone mitombo amin'ny fividianana entana dia angamba no dingana lehibe indrindra amin'ny lalany. Ny marina dia mividy HGH amin'ny mpivarotra "amin'ny tànana" na amin'ny tranonkala mampiahiahy ny ankamaroan'ny diabeta. Saingy ny 75% ny zava-mahadomelina ao Thailand dia sandoka iray tapaka. Ary na ny tena namana namidy aza dia tsy mety miasa noho ny antony tsy nitahirizana azy ireo - HGH dia tokony hijanona ao amin'ny vata fampangatsiahana, mampitombo ny fiainany izany.
Ny fehin-kevitra iray dia ny hividy hormonina ho an'ny hormonina ao amin'ny levitra. Fanafody voarara izany, fa raha ny fanatanjahantena fotsiny ihany. Hividy hormon-tsolika ho an'ny fahavoazana mavesatra izay mety ho hitanao any Bangkok. Ny zava-mahadomelina HGH dia ny "Genotropin","Ansomone"Sy ny" Jintropin. "Ary ny" top four "," Tops blue "sy" Norditropin "malaza dia ny sandan'ny 100%. Ary na dia rehefa mividy famokarana pharmacie azo antoka aza ianao, dia tsy tokony hadino ny manamarina ny fandefasana fiarovana amin'ny fonosana Izay mifamatotra amin'ny mpanamboatra ny ady amin'ny hosoka.